से’तो पानी बगिरहने सम’स्याले हैरान हनुहुन्छ ? यसरी गर्नुहोस् घरमै उपचार ! – Taja Khawar
से’तो पानी बगिरहने सम’स्याले हैरान हनुहुन्छ ? यसरी गर्नुहोस् घरमै उपचार !
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २३, २०७८ समय: १:००:५७
का’ठमाडौँ । महिलाहरुको यौ’नाङ्गबाट सेतो वा हल्का पहेलो खालको पानी बग्ने प्राकृतिक प्रक्रिया हो, ल्युकोरिया (Leukorrhea) । महिनावारी सुरु हुने उमेरका कि’शोरीहरुदेखि म’हि’नावारी रोकिएका महिलाहरुसम्म अर्थात् सामान्यतः प्रजनन उमेर समूह (१५ वर्षको उमेरदेखि ४९ वर्ष उमेरसम्म) का महिलाहरुमा हुन सक्ने नितान्त प्राकृतिक र सामान्य चक्र हो ल्युकोरि’या।
महिलाको यो’नीबाट सेतो रंगको, चिपचिप खालको पानी बग्नुलाई स्वास्थ्यको भाषामा ‘ल्युकोरिया’ भनिन्छ। यो भनेको हाम्रो शरीरले स्वतः महिला प्रजनन अंगको सफा’इ गर्ने प्राकृतिक प्रक्रिया हो।
यो प्र’क्रियाले यो ‘नीको भित्री भागलाई सफाइ गर्ने, त्यस क्षेत्रको पीएच मानलाई आवश्यक मात्रामा राखेर व्याक्टेरिया, ढुसी वा अन्य कुनै पनि किसिमका संक्रमणहरुबाट यौ’नाङ्गलाई बचाउने काममा सहयोग गरिरहेको हुन्छ। यस अर्थमा ल्युकोरिया उपयोगी प्रक्रि’या नै हो।
तर प्रकृतिले नि’र्धारित गरिदिएको त्यो उपयोगी प्रक्रियामा पनि कहिलेकाहीँ गडबडी देखापर्न सक्छ। त्यस्तो ग’डबडी देखापर्नु चाहिँ समस्याको सू’चक पनि हो।सेतो वा हल्का पहेलो खालको पानी बग्ने आम महि’लामा हुने स’म’स्या हो । यसले महिला स्वा’स्थ्यमा ठूलो अ’स’र पनि गर्छ।महि’नावारीको अघिपछि यस्तो पानी बग्नु धेरैको स’म’स्या हो। कतिपय अवस्थामा यो अधिक मात्रामा हुने गर्छ। यस’ले अन्य रोगको सं’केत पनि गर्नेगर्छ।
से’तो पानी बग्ने कारण
आफ्नो संवे’दनशील अंगको ठिक रुपमा सफाई नहुनु, कु’नैपनि स्थितिमा धेरै हतोत्साहित हुनु, बि’रा’मी मानिससँग सम्बन्ध राख्नु, पटक पटक गर्भपतन गराउनु।कुनै रुपमा सं’क्र’मण या बि’रा’मीको कारण, शरीरमा पोषक तत्वको कमी हुनु आदि ।
यस रोगका ल’क्षणहरु
च’क्कर आउनु, शरीरमा थकावट हुनु, संवेदनशील अंग चिलाउनु, शरीरमा कम’जो’री महसुस हुनु, संवेदनशील अंगबाट दू’र्गन्ध आउनु, कब्जियत एवं टाउको दुखाई हुनु ।
आफ्नो’ संवेदनशील अंगलाई पूरा रुपमा सुख्खा र सफा राख्नुपर्छ । जसरी भएपनि संक्रमण फैलिने समस्या कम गराउनुपर्छ । म’हिनावारीको समयमा सफाईको पूरा ध्यान दिनुपर्छ । हरेक ४ देखि ६ घण्टापछि प्याड बदल्ने गर्नुपर्छ । हल्का पानीले यसलाई सफा गर्नुपर्छ । सुख्खा वा सुतीको कपडाबाट आफ्नो संवेदनशील अंगको सफाई गर्नु राम्रो हुने चिकित्सकह’रुको सुझाव छ ।
ल्युकोरियाको स’मस्या शरीरमा कमजोरीको कारणले हुने गर्दछ । यसको लागि आफ्नो खानामा पो’षण युक्त चिजलाई समेत सामेल ग’र्ने गर्नुपर्छ । जसबाट हाम्रो शरीर पूरा रुपमा स्वस्थ रहन्छ ।
यसबाट बच्ने घरे’लु उपाय
राति भिजाएर राखेको अन्जीरलाई बिहान पानीमा पिसेर खाली पेट खाने गर्नुपर्छ । आफ्नो डा’इटमा केरा पनि मिसाउने गर्नुपर्छ ।फिटकिरीलाई तातो पानीमा भि’जाएर त्यसले आफ्नो संवेदनशील अंगको सफाई गर्ने गर्नुपर्छ । यस्तो गर्दा एक हप्तामा नै सेतो पानी बग्ने स’मस्याको स’माधान हुने गर्दछ ।
चामल उमालेर त्यसैमा रहेको पा’नीले आफ्नो संवेदनशील अंगको सफाई गर्नुपर्छ ।१ लिटर पानीमा अदुवालाई राम्रोसँग उमालेर जब पानी आधा हुन्छ त्यसपछि पिउने गर्नुपर्छ ।
गुलावको पत्तालाई सुख्खा गरेर पाउ’डर बनाउने गर्नुपर्छ । दैनिक दूधको साथमा यसको सेवन गर्ने गर्नुपर्छ । मेथीको पानीबाट पनि संवेदनशील अंगको स’फाई गर्न सकिन्छ । यसको साथमा हामी मेथीको धुलोलाई पानीमा राखेर पनि लिन सकिन्छ ।भुटेको च’नालाई सख्खरको साथमा मिसेर दूध वा घिउको साथमा मिलाएर दैनि’क यसको सेवन गर्न सकिन्छ।
Last Updated on: August 7th, 2021 at 1:00 am